ယောဟန်အောင်: ဖဒိုမန်းရှာနဲ့ မပြည့်မစုံ ကျနော်၏ ဂုဏ်ပြုစာတို
ဖဒိုမန်းရှာ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတယ်ကြားတော့ အတော်ကျေကွဲမိတယ်။ ကရင်လူမျိုးတွေအတွက်သာမက ကျနော်တို့နိုင်ငံ အတွက်လည်း အခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်သလို ခံစားရပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်ရေးစတင်ချိန်ကစလို့ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဆင်နွှဲလာခဲ့ရတာ နှစ် ၆၀ ရှိတော့မယ်။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) ဆိုတာလည်း လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်လာရတာ နှစ် ၆၀ ရှိတော့မယ်။ ဒီလောက် ရှည်ကြာတဲ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာ အကျအဆုံး၊ အဆုံး အရှုံး တွေလည်း မနည်းလှဘူး။ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် ပြည်သူတွေလည်း အသက်အိုးအိမ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ကျနော် ABSDF မှာ အောက်ခြေတပ်မှာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူတော့ ဖဒိုမန်းရှာနဲ့ သိပ်ရင်းနှီး ဆက်ဆံရမှု မရှိလှဘူး။ ကျောင်းသားတပ်မတော်တပ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံဖို့က ဆက်သွယ်ရေးတပ်က ဗိုလ်မှူးခေးနီ၊ ဗိုလ်မှူးရောဂျာ၊ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူး ကြီး ကျော့ပိ (လောဝါဒီ) တို့နဲ့ ပိုဆက်ဆံကြရတယ်။ ဖဒိုမန်းရှာက အဲသည်အချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မြရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဆိုပြီး သူ့ တာဝန်က နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ NLD-LA၊ နောက်ပိုင်း စင်ပြိုင် အစိုးရဖွဲ့ တော့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) တို့နဲ့ ပိုဆက်ဆံရတယ်။ အချို့အစည်းအဝေးတွေမှာ တွေ့ဆုံရတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ သတိပြုမိ တာကတော့ သူက မလိုအပ်ရင် စကားသိပ်မပြောတတ်တာရယ်၊ လိုအပ်လာရင် ချက်ကျ လက်ကျ လေအေးအေးနဲ့ တဖက် သား နားဝင်ခံသာအောင် ပြောပြနိုင်တာပါပဲ။ တကယ်တော့ ကြေငြာချက်အတော်များများမှာ နောက်က ဦးဏှောက်သဖွယ် ပါဝင်ခဲ့ရတယ် ဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။
၁၉၉၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ရောက်လာကြတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ မာနယ် ပလောစာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ လုပ်ကြတော့ အကျိတ်အနယ်ညှိနှိုင်းကြရတာ တွေ့ရတယ်။ အဲသည်အချိန်က ABSDF ခေါင်းဆောင် တွေကိုယ်တိုင် ညနက်မိုးချုပ်မှ ပြန်လာခဲ့ကြရတာမျိုး တွေ့ရတယ်။ သည် အစည်းအဝေးတွေမှာလည်း ဖဒိုမန်းရှာက တည် တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အုပ်စုအားလုံး သင့်မြတ်အောင် ကြိုးစားလို့၊ သူ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး အစွမ်းကို ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ စကားလုံး တခု ချင်းကအစ သူ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေ မနည်းဘူး။
ဖဒိုမန်းရှာက ခပ်အေးအေး နှိမ့်နှိမ့်ချချပဲ နေတတ်တယ်။ သူက အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက သဖွယ်ဖြစ်နေတော့ စစ်ယူနီဖောင်းတွေ ဘာတွေနဲ့လည်း သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ စစ်အင်္ကျီအနွမ်းနဲ့ ပုဆိုးနဲ့ ၀တ်တာမျိုးတော့ တွေ့ရတတ်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ရင်းနှီး လာပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့က အလုပ်မရှိ ရင်လည်း သူမအားမှန်းသိတော့ သူ့အိမ်ကို သိပ်မရောက်ဖြစ်ကျဘူး။ တခါတလေတော့ ရောက်တယ်။ ကျနော်က တခါတလေ “ဖဒို”လို့ ခေါ်လေ့ရှိသလို၊ တခါတလေလည်း “ဆရာ”လို့ပဲ လွယ် လွယ်ခေါ်မိပါတယ်။
ဖဒိုမန်းရှာက အနုပညာရှိသူလို့ ပြောရင်လည်း မမှားဘူး။ “ရေဆန်” ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဘာတွေ တော့ ရေးတယ်။ ကဗျာတွေ ဘာတွေ ရေးတာတော့ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကဗျာဆန်တယ်လို့ ပြောရတာက သူ တောထဲ မှာ ဆောက်ထားတတ်တဲ့ အိမ်အလှကလေးတွေကြောင့်ပါ။ အိမ်ဆောက်ရင် ရွေးတဲ့နေရာက ခွင်ကျတယ်။ ရသမျှ သစ်ဝါးကိုပဲ အားပြုလို့ အိမ်ကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဆောက်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ စားပင် သီးပင်တွေ၊ ပန်းပင်တွေကို အိမ်မှာ သာယာ ဖွယ်ဖြစ်အောင် အကျအနစိုက်ထားတတ်တယ်။ မြေပေါက်တဲ့ ပန်းရောင်စုံကလေးတွေရှိသလို၊ ဆိုင်းတွဲ နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ တော သစ်ခွမျိုးစုံလည်း ရှိတတ်တယ်။
တခါတလေ ကျနော်တို့ရောက်လာရင် သူ့ဇနီးက ရှိတာနဲ့ ထမင်းထုတ်ကျွေးတတ်ပါတယ်။ ကျနော်က နာမည်မမှတ်မိတော့ ဘူး။ တွေ့ရင်လည်း လွယ်လွယ် အမေ (အမိုး) လို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူက ဗမာစကား သိပ်မရည်လည်သော်လည်း အားလုံး ကို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ ပဲခူးရိုးမနဲ့ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၃) ဒေသမှာနေစဉ် သူတို့ခက်ခဲပင်ပန်း ရပုံ တွေ၊ ထိုးစစ်ကာလတွေမှာ ပြေးလွှားနေကြရပြီး အတည်တကျ မနေခဲ့ကြရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ပြန်ပြောပြတတ် ပါတယ်။ သူကလည်း တကယ့်ပါရမီဖြည့်ဖက်လို့ ပြောရမယ်။ နိုင်ငံရေး သိပ်မပြောပေမယ့် အမာခံ ရဲရဲတောက်ပါပဲ။ သူက ဖဒိုထက် အရင် မနှစ်က ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲသည်အချိန်က ထီးကပလယ်စခန်းက ကေအန်ယူ ယာယီဌာနချုပ် လုပ်ထားတဲ့ နေရာပါ။ အဲသည်မှာလည်း သူ့အိမ် ကလေး (တဲကလေးဆိုရင်တော့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်) က သပ်သပ်ယပ်ယပ်၊ ကဗျာဆန်ဆန်ပါပဲ။ သူနဲ့ အတူနေတဲ့ ရဲဘော် တယောက်နဲ့ လည်း ကျနော်စကားပြောရသေးတယ်။ ဒီလူက ကရင်လူမျိုး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တခုမှာ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဗျူဟာ လေ့လာမှုပညာ မဟာဘွဲ့ (security studies) လေ့လာပြီး ပြန်လာသူ၊ ဒါပေမယ့် ထင်းခွဲနေတာ၊ ထမင်း ချက်နေတာ တွေ့ရ တယ်။ ဒါကိုတော့လည်း ကျနော်သဘောမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်မြင်တာကတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို သေသေချာချာ သူတို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိုင်း အသုံးချသင့်တယ် ထင်တာကိုး။ နောက်ပိုင်းတော့ ဒီလူငယ်ကိုလည်း ဘာဖြစ် သွားမှန်း ကျနော်မသိတော့ ပါဘူး။ ပြန်မတွေ့ဖြစ်ဖူး။
ဒါတင်မကပါဘူး။ ကျနော်နဲ့သူ သဘောမတူခဲ့တဲ့ အခြား အချက်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့က ငယ်ရွယ်ချိန်၊ စစ် သွေး ကြွလွန်းနေချိန်မှာ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် သူ့သဘောကို တခါတလေလည်း သဘောမတွေ့မိဘူး။ တခါတလေလည်း ဒီလို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရင် ရရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ကေအန်ယူမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်နိုင်ရတာလဲ။ ...ဒီလို လုပ်သင့် တယ်။ ဟိုလို လုပ်သင့်တယ်။ သူက အင်အားကြီးတဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ကေအန်ယူအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အနေနဲ့ ဒီလို မျိုး ဦးဆောင်ပြီး ဘယ်လို စတင်လုပ်သင့်တယ်... စသဖြင့် မြင်ခဲ့မိကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည် အချိန်က အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အကန့်အသတ်တွေ၊ အခြား မမြင်သာတဲ့ အကန့်အသတ်တွေကိုလည်း ထည့်မစဉ်းစားမိခဲ့ကြ ပါဘူး။
ဖဒိုမန်းရှာ ဘ၀မှာ မအောင်မြင်မှုတွေ၊ မပြည့်ဝခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း ရှိခဲ့လိမ့်မယ်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကလည်း လူ အများ နဲ့ လုပ်ကြရတဲ့သဘော၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တိုင်း မဖြစ်နိုင်တော့လည်း ခက်သားလား။ သူရဲ့ မပြည့်ဝခဲ့တဲ့ အကြီးမားဆုံး အိပ်မက်က တော့ ကရင်အမျိုးသားတွေအတွက် စွမ်းဆောင်ပေးချင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်မီ တိုးတက်တဲ့၊ လွတ်လပ် အမှီအခိုကင်းတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေ ပြည့်ဝပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ သဟဇာတနေထိုင်နိုင်ကြ မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း အခြားကိစ္စတွေမှာလည်း သူစိတ်လက် မချမ်းသာ ဖြစ်နိုင်တာကို ကျနော် တွေးမိ သေးတယ်။ ဥပမာ- ကေအန်ယူကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီကေဘီအေ (DKBA) အဖြစ် ခွဲထွက် သွားကြတဲ့ အကွဲ၊ နောက်ပိုင်း ကရင်တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ အဆင့် ရောက်ကြရတဲ့အထိ သွေးချောင်းစီး ပြဿနာ ဖြေရှင်း ကြရတာတွေ၊ နောက်တခုက တော်လှန်ရေးရဲ့ ဌာနချုပ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ မာနယ်ပလော ကျဆုံးခန်းပဲ။ ဒီကေဘီအေ အကွဲ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ မာနယ်ပလောလည်း ကျသွားတယ်။ တကယ်တော့ ရှေ့တန်းမဲညောခီးတောင်တန်း မှာ ရံထားတဲ့ ရဲဘော်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အကွဲနောက် လိုက်သွားတော့ မကျလည်း ဘယ်ခံနိုင်ပါတော့မလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်မြရေးထားတဲ့ ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတိစာအုပ်မှာ မာနယ်ပလောကျရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစည်းအဝေး တခုမှာ ဖဒိုမန်းရှာက သူ့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်း ဖတ်ရသေးတယ်။
Posted by Yaw Han Aung at 7:59 AM
ပဒိုမန်းရှာဟာ လင်းယုန် တကောင်လို ပျံသန်းခဲ့ပြီး `ထိုက်စန်း`တောင်ထက် လေးခဲ့သူပါပဲ၊ အများအကျိုး ဆောင်ခဲ့သူ တယောက်အဖြစ် နောက်ဆုံးအချိန်အထိ လူထုကို ပေးဆပ်သွားခဲ့တာ ကျနော်တို. အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ၊
."ဖဒိုမန်းရှာနဲ့ မပြည့်မစုံ ကျနော်၏ ဂုဏ်ပြုစာတို" လို့ တပ်ထားပေမဲ့ ကျနော်အတွက်တော့ တကယ့် မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေက ဖတီးအတွက် အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ဂုဏ်ပြုရေးတဲ့ အတွက်အစ်ကို့ အပေါ်လေးစားမြတ်နိုးတဲ့ စိတ်တွေ ဝင်ရောက် နေလေရဲ့ ...ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ရတာအစ်ကို ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်.နောင်လည်း တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လွမ်းဆွတ်စရာလေးတွေ၊ ဂုဏ်ယူအတုယူစရာလေးတွေလည်း ရေးပေးပါအုံး...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..